Ilay Vavy Antitra sy ny Ovy: Niparitaka ny Tantaran’ny Fahantran’i Ukraine · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2013 7:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, Deutsch, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Ny Alarobia 13 Martsa, Olena Danko, mpanao gazety dia nanoratra lahatsoratra fohy [uk] iray tao amin'ny pejiny Facebook momba ny fifanenany tamina vavy antitra iray tany an-tsena izay tsy nanana afatsy vola kely mba hividianana singan'ovy tokana. Tantara mampalahelo hahalalana an'i Ukraine izany, izay tsy mahagaga intsony ny olona izay efa nonina tany amin'ny firenena na dia nandritra ny fotoana fohy aza. Tsy nieritreritra akory i Danko hoe hisy akony izany – nila nizara ny halahelony sy ny fahasosorany mikasika ny toe-draharaha misy any Ukraine kotsiny izy. Saingy maro ireo mpanao aterineto no nahita fa mandona mafy izany tantarana fahantràna goavana izany ka nozaraina; ary tanaty ora vitsy monja dia efa niparitaka.
Roa andro taty aorana, toy izao ny lisitra iray zara raha misy mikasika ny fizaràna izany:
Efa nozaraina in-4000 eo ho eo ny pejy Facebook an'i Danko [uk];
Nozarain'ny mpampiasa Facebook maherin'ny 2500 ny sarin'ny lahatsoratr'i Danko nalain'i Mykola Kokhanivsky;
Efa ho manodidina ny 3600 ny fizaràna ny sary nalaina tao amin'ny Fanatsarana Ireo Vavolombelon'ny Fiangonana (Церковь Свидетелей Покращення; ru, uk; mpankafy 17 420), vondrona Facebook iray naorina mba hanesoana ilay voalaza fa “fanatsarana” ny fitondrana ankehitriny (fomba fiteny izay efa nivadika ho meme [ru]);
Ny Vondron'ireo Lehilahy Mahery Setra, vondrona Okrainiana VKontakte iray ahitàna mpankafy mahern'ny 671 000, no nahaangona mpankafy manakaiky ny 8800 tao amin'ny famoahany ny sarin'ny tantaran'i Danko;
Ny vondrona Vkontakte noforonin'ireo mpankafy FC Karpaty Lviv dia nahazo mpankafy 2400 tao amin'ny sehon'ilay sary;
Serhiy Leshchenko (mpankafy 8000), mpanao gazety ao amin'ny Ukrainska Pravda dia nanamarika ny pejy Facebook an'i PM Mykola Azarov (mpankafy 24 541) tao amin'ny fizaràny ny tantaran'i Danko, ary nangataka ny mba hamakian'ny Praiminisitra an'io rehefa misy fotoana izy; mpampiasa miisa 473 no nizara ny lahatsoratr'i Leshchenko, ary maro ireo nandeha nizara ny tantaran'i Danko tao amin'ny pejin'i Azarov;
Voadika amin'ny teny Rosiana ny tantaran'i Danko, nataona mpandika teny iray tsy mitonona anarana izay naka fotoana hamadihana ny vidin'ireo ovy amin'ny vola Okraniana hryvnias ho robla Rosiana
Indro ary ny tantaran'i Danko, izay nitranga [uk] tany amin'ny tananan'i Brovary, tanàna lavidavitry ny Kiev renivohitr'i Ukraine:
Nandeha niantsena aho. Tao amin'ny fitoeran'ny legioma tao amin'ny tranombarotra no nahitàko vavy antitra iray nitazona singany iray!!!! ovy! Gina ilay mpivarotra mahonena. Izaho koa torak'izany. Niteny ilay vavy antitra fa avy nandoa hofan-trano izy sy ny adidy amin'ny fanjakana ary fanafody izy, ka dia miaina amin'izay misy sisa izao. Ankehitriny dia singan'ovy iray sy ampahefatra mofo sisa no mba azony vidiana. Tohina aho. Toy ny tsy teo, lasa aho naka harona iray nofenoiko ovy, nandoa vola ireo ary nomeko ilay vavy antitra teo amin'ny fandoavambola. Somary menatra izy, nisaotra ahy niaraka tamina tso-drano izy ary nitomany. Izaho kosa nitomany teny amin'ny lalako nody. 6 hryvnias monja no vidin'izany ovy iray harona izany [0.74 dolara]. Karazana firenena inona re ity e, raha toa ka mitontaly antapitrisany ireo jiro mirenty ao amin'ny [lapan'ny Filoha any Mezhyhirya], ireo famantaranandron'ny Praiminisitra mitontaly dolara hetsiny maro, voahodinkodinana ny mliara maro mba hanamboarana làlana tsy misy akory, dia ovy kely iray no mba lanjain'ilay vavy antitra nijoro teo?????? Aiza koa izao ireo fanatsarana nataonareo???? [Mendrika ny ho dorana ianareo rehetra]!
Sarin'ilay tantaran'i Olena Danko, nalaina roa andro taorian'ny namoahana izany.
Ary indreto ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo izay nifidy ny hizara ny tantaran'i Danko na ny haneho hevitra fotsiny.
Nanoratra [ru] i Nataly Levina hoe:
Firenena nidiran-doza io. Etsy andaniny – ireo vahoaka antitra lazoin'ny hanoanana, ireo ankizy natao tsinontsinona, vola tsara vintana raha tsy nariana teny an-dàlana, ireo biby hampijaliana na nariana fotsiny ho faty, ireo ray aman-dreny lasa adala noho ny tsy fahafahany manampy ireo zanany marary, na dia 1000 dolara monja aza ny vola ilaina. Ary etsy ankilany – ireo lapa izay mitontaly amina miliara maro, fiara raitra, sambokely, angidimby, kojakoja maro lafo vidy, famantaranandro, poketra sy fialan-tsasatra amin'ny faran'ny herinandro, mendrika fiainana maro ireo rehetra ireo fa tsy an-jaza iray ihany.
Nanoratra [uk] i Oleksandr Zorya hoe:
Izao ilay izy, tsy noho ny maha-toy izao ny firenena izany! Ny antony dia ireo olona t sy mahay manaja tena. Satria raha nanaja tena izy ireo, dia efa tamin'ny fialan-tsasatry ny taona 2012 tany amin'ny UEFA Euro 2012 isika no nilalao baolina kitra niaraka tamin'ny mpitarika ireo mpikambana ao amin'ny Antokom-Paritra eo amin'ny fitondràna], ary tamin'ny lalao famaranana, niaraka tamin'ny lohan'ny Filoha Victor Yanukovych, fara-faharatsiny!!!
Nanoratra [ru] Ira Alymova hoe:
Mandany maherin'ny iray tapitrisa ry zareo mba hifiran'ny Filoha isanandro, ilay vavy antitra kosa mividy singan'ovy iray satria tsy manana vola hividianana mihoatra noho izany izy!!!!! Eropa inona no resahanao!!!!!??????
Nanoratra [uk] i Larysa Masykova hoe:
Io ary ilay fanatsaràna…. Tany ampitan-dranomasina aho nahita ireo zokiolona Alimà mitsangatsangana, manao fitsidihana, maka sary ireo vakoka manan-tantara. Manam-bola sy herim-po ary fahamendrehana ho an'izany izy ireo. Ahoana kosa ny fomba iainan'ireo zokiolontsika ny andro sisa iainany, indrindra ireo monin-drery???
Lora Prykhodko nanoratra [ru] hoe:
- Tsaratsara kokoa ny fiainantsika izao, – hoy ny governemanta
- Sambatra ianareo izany, – hoy ny navalin'ny vahoaka
Natalka Fedechko nanoratra [uk] hoe:
Ohatrinona no tokony ho vidin'ny famantaranandron'ny Praiminisitra Mykola Azarov raha toa avadika ho ovy io vidiny io? […]
Sergei Gorbachevsky nanoratra [ru] hoe:
Ny reniko [nampianatra nandritra ny 50 taona], 1100 [135 dolara] hryvnias ny fisotroan-dronony isam-bolana.
Alex Siriy nanampy [uk] fa:
Marina izany, ary manana famantaranandro izay mitontaly 24,000 dolara [ru] ny Kominista ao amin'ny antenimiera, Oksana Kaletnik.
Yarema Dukh, mpampiasa iray, dia tsy dia rototra loatra [uk] amin'ireo fanehoan-kevitra mikasika ny tantaran'i Danko:
[…] Ry vahoaka, tsy ao Ukraine ve ianareo ankehitriny sa ahoana?
Tsy hitanareo ve ireo mpisotro ronono mahantra eny an-tsena, any amin'ny magazay na mangataka tsotra izao eo ivelan'ny tranony isanandro?
Rahampitso, mandehana ary ampio ny manodidina anao na ireo vavy antitra sendra anao – na mandehana ary koa “dory avokoa ireo mpanao politika.”
Dia avy eo soraty anaty Facebook io ary raofy ireo fizaràna ny lahatsoratrao.
Satria izao ananantsika ny firenena iray manontolo mizara, mizara, mizara.
Katya Mykhaylova koa, mino [ru] fa tokony hivondrona ireo vahoaka ivelan'ny tambajotra ary hanampy azy ireo tsy manan-ko raisina:
Ry namana sy vahoaka tsara fanahy! Ndeha hanao “flashmob” momba ny fanampiana amin'ity sabotsy ity! Voalohany indrindra dia hofenointsika tsirairay avy ny Haron'ny Fanampiana ary amin'ny 10 maraina tsy diso (na amin'ny 11 maraina, na amin'ny mitatao vovonana) dia handeha eny andalam-be isika ka hanome ny harona, miaraka amin'ny firarian-tsoa ho salama tsara, ho an'ireo be antitra izay mila izany.
Ny Haron'ny Fanampiana dia mitontaly eo amin'ny 40 hryvnias [$ 5] eo ho eo sady misy sakafo folo andro sahaza ny olona antitra iray:
– vokatra avy amin'ny ronono
1 kilao avy, na mety ho ovy 2 kilao – tiandry zareo io rehefa misy betsaka.
Ankoatr'izay, tsara raha hampiana voatavo iray, dibera, paoma, akoho iray.
Ny rehetra! Ny mponina rehetra isaky ny tanan-dehibe! Ny fianakaviana tsirairay! Ndeha hanomboka hanome fanampiana kely ho an'ireo tsy manan-ko raisina. […]
Raha mahazo olona liana sy tsara fanahy 100 amina tanan-dehibe 10 isika, dia ho mora kokoa ny fiainan'ireo olona 1000 antitra sy irery… mandritra ny iray volana eo ho eo. Dia avy eo mila manangona harona sy namana indray isika, mba hampitombo ny isan'ireo olona ireo
Amin'ny Sabotsy mihaona… [any anaty magazay], tsena, […] akaiky ireo vavy antitra izay mivarotra enta-madinika eny akaikin'ireo fiantsonan'ny fiara an-dalamby.
Vavy antitra iray ao an-tananan'i Brovary, tanana manodidina an'i Kviv. Sarin'i Veronica Khokhlova, 29 May 2008.